कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सत्ता समीकरणबारे निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष « Postpati – News For All
फागुन १३, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सत्ता समीकरणबारे अहिले छलफल गर्ने अवस्था नै नआएको बताएको छ।
बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपाको अवको अवस्था हेरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए।
उनले नेकपाको अबको यात्रा, संसद् बैठकपछिको परिस्थिति आदि हेरेर मात्रै कांग्रेसले निर्णय लिने बताए। उनले अहिलेनै सत्ता समीकरणका बारेमा छलफल गर्न हतार हुनेमा सबै पदाधिकारिको एक मत रहेको बताए।
‘कम्युनिस्ट पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेसम्म एकै छ, संसदीय दलको नेता ओली जी नै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा भोलि उहाँहरुको पार्टी एकै रहन्छ अथवा अर्को परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा कांग्रेसको नियन्त्रणको कुरा होइन’, उनले भने, ‘अहिले यो सत्ता समीकरणको विषयमा कांग्रेसले यसो गर्छ, उसो गर्छ भन्ने विषय आएको छैन। अब संसदको बैठक होस् परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णय लिन्छ।’ उनले संसद् विघटनको विषय अदालतले उल्ट्याएसँगै सकिएको बताए।
सभापति देउवालाई प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव गरेकोबारे पत्रकारले राखेको प्रश्नमा उनले त्यसको कुनै अर्थ नरहेको बताए। ‘दलका नेताहरुबीच छलफल हुन्छ, प्रस्ताव आउँछ’, उनले भने, ‘अहिले त्यसको कुनै अर्थ छैन।’
बैठकको सुरुमै सभापति देउवाले नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए। पदाधिकारीहरुले देउवालाई पार्टीको लाइन के हो भन्ने प्रस्ट बनाउन आग्रह गर्दै ओलीसँग सहकार्यको नजिक पुगेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए।
जवाफमा देउवाले आफूले कुनै पनि समूहलाई बचन दिइनसकेको र नेकपा वैधानिक रुपमा बिभाजन नभएसम्म सहकार्य हुन नसक्ने बताएको जानकारी गराए। ‘मैले कुनै पनि समूहलाई औपचारिक जवाफ दिएको छैन’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेकपा विभाजन नभएसम्म सहकार्य हुँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका छलफल अगाडि बढाएका छन्। बुधबार नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले सहकार्यका लागि सभापति देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, देउवाले त्यसका लागि आफू सकरात्मक भए पनि प्रचण्ड–नेपाललाई पहिले पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन भनेका थिए। नेकपाका दुई समूह तल्लो तहसम्म नै विभाजन भए पनि वैधानिक रुपमा एउटै पार्टीमा छन्।
निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि समूहलाई नाम र चुनाव चिन्ह दिएको छैन। अहिलेसम्म नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय सुनाएको आयोगले त्यसपछि परेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको निवेदनमा निर्णय गरिसकेको छैन। कांग्रेस नेकपाको विभाजन वा एकताबारे टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि समूहसँग सहकार्य नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।